Mhlawumbe wonke umuntu owenza lezi zinyathelo kuqala ibhizinisi inthanethi ufuna ukufunda mayelana ezihlukahlukene zezinto, impumelelo odlule. Isayithi wadala futhi ugcwale imininingwane ewusizo, imenyu nice isayithi futhi ikhanga isivakashi uchofoze isixhumanisi .... Bese yini? Kudlula izinyanga, nokuya namanje at zero .. Abaningi abazi indlela yokulungisa isimo, uzama ukuheha izivakashi ngezindlela ezahlukene, zama ukunikeza nokuqina kwisayithi, ufunde indlela ubhalisa kwisayithi okubonisa abasebenzisi ukuthi isisetshenziswa kuyingozi ayiphumelelanga. Phakathi naleso sikhathi, indlela eya eziphakemeyo impumelelo ekuthuthukiseni indawo kumele sihambisane indlela eqotho nokuzithiba ukukhuthazwa mayunithi isikimu ikakhulukazi kuhambisana phambili yezenzo. Ngokwesibonelo, webmaster abaningi bakholelwa ukuthi udinga ukuqala ukugqugquzela enjalo ebalulekile indlela adale ibalazwe site ukuthi sizozama namuhla.
Kuyini ibalazwe isayithi ukudala ukuthi kuvela hhayi wonke umuntu ubonakala ukwazi abanikazi abaningi site. Ibalazwe yikhasi eyodwa ke, okuyinto inamazwi abhekisela ekhasini ngalinye yangaphakathi nsiza.
Ibalazwe Iningi uzama ukudala umnikazi, engqondweni yakhe iyithuluzi ngokudala lula inqubo ukusebenza isayithi umsebenzisi. Lokhu kuyiqiniso, kodwa ukuze adale ibalazwe site ofuna ngokushesha ngemva kokwabiwa kwezinsiza ukuze ukusingathwa ithwala isixazululo of inkinga eyodwa ngaphezulu - ukusheshisa nangenkomba izinjini.
Ibalazwe okuyinto kwanqunywa ukudala yona yelucwaningo kufanele kwenziwe ngesakhiwo ezithile - XML Ibalazwe. Le fomethi ayikwazi ukufunda yizivakashi, njengoba ikhadi kulokhu kuyinto ifayela le-XML equkethe uhlu konke URL lesayithi.
Ukudala-XML Ibalazwe athwala ngemgomo munye - ukusheshisa amarobhothi isisetshenziswa kokufakwa ohlwini izinjini. Kaningi kuyenzeka ukuthi eziningi Amakhasi kungukuthi ngokobungako. Lokhu kungenxa yokuthi injini izicabucabu nje "musa sifinyelele" kuzo izintwa zokuphila and akusho ukuqaphela ikhasi enk khona. Ibalazwe ezidalwe Ibalazwe XML inikeza amarobhothi ulwazi oluphelele ekhasini isayithi ngayinye, ne kanzulu endaweni eyodwa.
Ngakho amarobhothi uzothola uhlu lwabo bonke URL ezinsiza, nalawo kunzima ukuthola nge scan ejwayelekile. Ngaphandle injini izicabucabu uzobona ulwazi mayelana nobuningi kushintsha ikhasi website. Nale ndlela, amarobhothi kuyodingeka akukho abangakwenza ngaphandle kokuhlala bheka kungekho indawo kaningi, ngoba bazi ukuthi noma iluphi ushintsho.
Ngokusekelwe kulokhu okungenhla, singathola esiphethweni elula: I-wesayithi ngamunye lukhonjwe, kumele udale Ibalazwe XML. Kuyaphawuleka ukuthi ukwenza kanjalo akunzima.
Kulabo amasayithi ube nenamba ngokwanele enkulu Amakhasi, efaneleka kakhulu kuyinto isicelo ngokudala indawo amabalazwe yesevisi ezikhethekile. Isibonelo omunye amasevisi yimpumelelo kakhulu ukwakha Ibalazwe yithuluzi-XML - Sitemaps.com. imiyalelo wokudala amamephu usebenzisa le sevisi esethwe ngezansi.
1. Uma i-akhawunti isidaliwe kukholamu esifanelana Starling ikheli URL sesayithi okufanele dala imephu.
2. Ohlwini Chang freguency langena izinguquko imvamisa kumtfombolusito. Nge kwalokho yansuku zonke izihloko, izindaba, noma umane hlela okuqukethwe, udinga ukukhetha Daily, uma lokhu kwenzeka kanye ngesonto, Masonto onke esibekiwe, kanye ngenyanga - Mounthly.
3. Ukubala ukuguqulwa Kugcine kuhloswe ukuba ubheke izinguquko zesimanje ohlelweni, okuyinto kuncike umtfombolusito. Lapha kubalulekile ukubeka umkhaza entweni Sebenzisa amaseva personse, okungukuthi, ukusebenzisa idatha obunikezwa iseva.
4. Priority Ibhokisi yakhelwe ukhombise kuqala kwekhasi main maqondana abanye. Lapha kumele ucacise Priority okuzenzakalelayo.
5. Cindezela inkinobho Qala.
6. Ukulanda ubhedu ikhadi - Thwebula un - onomfutho-XML Ibalazwe.
7. ikhadi kumele agcinwe kwikhompyutha ngaphansi XML igama Ibalazwe.
8. Ifayela eliqukethe ibalazwe site kufanele ukulayishwa lwemibhalo impande kwalezi zinsiza. Ezimweni eziningi, lokhu ifolda onegama public.htm.
Yilokho empeleni zonke - Ibalazwe ngomumo!
Indlela Pheka Ithanga pancake ngaphandle amaqanda Ungadliwa